रोचक खबर – Page 16 – Mission
Oct292017 by मिसनटुडे संवाददाताNo Comments
एजेन्सी, १२ कार्तिक । जापानमा एक १८ वर्षीया किशोरीलाई उनको विद्यालयले प्राकृतिक रुपमै खैरो रहेको कपाललाई बारम्बार कालो पार्न लगाएपछि उनले स्थानीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी छन्। उनले क्षतिपुर्ति समेत माग गरेकी छिन् । ओसाका शहर नजिकै रहेको उनको माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीहरुको कपाल कालो रंगको हुनुपर्ने नियम पालना नगरिए विद्यालय छाड्न समेत दवाब दिएको ती कि
नेपालमा पनि जग्गा बिवादका कारण बेला बेला बिकास निर्माणमा समस्या आउने गरेको छ । खासगरि बाटो निमार्ण तथा बिस्तारको सवालमा नेपालमा यस्तो बिवाद हुने गरेको छ । नेपालको शहरी क्षेत्रमा बाटो बिस्तार गर्दा धेरैका ठुलाठुला भवनहरु भत्काउने गरेका उदारहण प्रशस्त छन । यो नौलो होईन तर जापानमा भने राजमार्ग निमार्णका क्रममा बिबाद भएपछि सरकारले घर जस्ताको तस्तै राखेर घरभित्रैबाट राजमार्ग बनाएको छ । जाप
Oct252017 by मिसनटुडे संवाददाताNo Comments
ब्राजिलमा अढाई सय मानिस एकसाथ पुलबाट हाम्फाले (भिडियोसहित हेर्नुहोस)
कीर्तिमान कायम गर्ने तरिका फरक–फरक हुन्छन् । ब्राजिलमा हालै मात्र पुलबाट हाम्फालेर मानिसहरुले कीर्तिमान कायम गरेका छन् । ३० मिटर अग्लो पुलबाट एकसाथ २ सय ४५ जना मानिसले हाम्फालेर विश्व कीर्तिमान कायम गरेका हुन् । दक्षिणपूर्वी राज्य साओपाओलोमा यो कीर्तिमानी कार्य गरिएको हो । सबै मानिसहरुले एकसाथ एक डोरीमा समाएर पुलबाट हाम्फालेका थिए । उनीहरु भुइँमा भने बजारिएनन् । डोरीमा बाँधिएका हुनाले पि
काठमाडौं, अमेरिकाको प्रतिबन्धको बाबजुद छोटो समयमै पश्चिमा राष्ट्रहरुले नसोचेको रफ्तारमा परमाणु हतियार परीक्षण र देश विकासमा उत्तर कोरियाले उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्नुमा काल्पनिक कथाहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । उत्तर कोरियामा लागु गरिएको ‘साँनगान’ अर्थात ‘सेना पहिले’को नीति प्रभावकारी मानिन्छ । कोरियाली युद्धपछि सन् १९६० मा किम इल सुंगले यस नीतिको सुरुवात गरेका थिए । यसै नीतिमा आधारित दुई
Oct242017 by मिसनटुडे संवाददाताNo Comments
गौतम बुद्धसँग जोडिएका १८ प्रसंग जसले तपाईको जीवन बदल्न सक्छ
भगवान गौतम बुद्ध इतिहासका सवै भन्दा महान व्यक्ति मध्य एक हुन, जसले बौद्ध धर्मको रुपमा मानवतालाई एक अमुल्य उपहार दिए। उनले स्थापना गरेको बौद्ध धर्म आज विश्वमा ४० करोड भन्दा पनि बढि ब्यक्तिहरुले मान्दै आईरहेका छन। आज हामी भगवान गौतम बुद्ध सँग जोडिएका केहि अनमोल विचारका बारेमा चर्चा गर्ने छौ, जुन विचारहरु लाई तपाईले पनि ग्रहण गर्नुभयो भने तपाइको जीवनमा पनि परिवतर्न ल्याउन सक्नेछ ।
यौन जीवनलाई कसरी सफल बनाउने ? यी हुन १० उपाय
मानिसका लागि यौन अपरिहार्य आवश्यक्ता हो । हाम्रो सामाजिक बनौट अनुसार यौज्न जीवनलाई खुल्ला नराखिएकाले यसका कारण विभिन्न दुर्घटनाहरु पनि हुने गरेको हामीले बेला बेलामा सुनका छौं । तर मानव जीवनको अभिन्न आवश्यक्ताको रुपमा रहेको यौन जीवनलाई सहज र सफल बनाउने केही उपायहरुको बारेमा चर्चा गरौं । –यौनसम्पर्कका बेला हरेक कुरालाई गम्भीर रूपले लिनु हुँदैन । अन्तरंग पलहरूलाई सधै ख्यालठट्टाको रूपमा लिनु
एउटै बाइकमा पाँच व्यक्ति सवार देखेपछि प्रहरीले यस्तो गरे
जेन्सी/ नियम अनुसार बाइकमा दुई व्यक्तिमात्र सवारी गर्न सक्छन् । तेस्रो व्यक्ति बसेको अवस्थामा पुलिसले थुप्रैलाई कारवाही गरेको हामीले देखेका र भोगेका पनि छौं । तर एउटा बाइकमा पाँच व्यक्ति सवार भएको र ट्राफिक प्रहरीले देखेको अवस्थामा के होला ? आन्ध्र प्रदेश पुलिसका अधिकारीले जे गरे त्यसले तपार्ईंको अनुहारमा मुस्कान ल्याइदिन्छ । बेंगलुरुका डिसिपी ट्राफिक अभिषेक गोयलले एक पुलिसको तस्बिर सेयर गरेका